उपनिर्वाचनमार्फत ओली सरकारलाई सच्याउनुपर्छ ः सभापति देउवा
November 23, 2019 7:30 pm
पोखरा, ७ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले आशन्न उपनिर्वाचन जितेर सरकारका पक्षमा जनमत छैन भन्ने सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन चाहेको बताएका छन् । उनले केपी ओली सरकारलाई तिमी गलत बाटोमा छौं, अब सच्चिनुपर्छ भन्नकै लागि पनि यो उपनिर्वाचन कांग्रेसले जित्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । नेपाली कांग्रेस, पोखरा–१६ ले आयोजना गरेको उपनिर्वाचन लक्षित चुनावी सभालाई संवोधन गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिष्ट सरकारले जनताका हक अधिकार खोस्ने काम गरेको, न्यायालय, प्रेस, संवैधानिक अंगहरूमा हस्तक्षेप गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाए ।
सभापति देउवाले जनताले थेग्नै नसक्ने गरी कर वृद्धि गर्ने सरकारको कदमलाई सच्याउन पनि यो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनुपर्नेमा जोड दिए । केपी ओलीको खोक्रा आश्वासन अब जनताले नपत्याउने भन्दै सभापति देउवाले ओलीको राष्ट्रवाद लिपुलेक र कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत भएको आरोप लगाए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भेटेर भारतले मिचेका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर, हामी साथ दिन्छौं भन्यौं, सडकबाट आन्दोलन गरेर सरकारका बन्द आँखा र खान खोल्न खोज्यौं तर सरकार मौन छ, कानमा तेल हालेर अझै बसिरहेको छ’, उनले भने । उनले सरकार अब पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध अघि बढ्दै गए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिए । सभापति देउवाले तपस्वी नेता खेमराज पौडेलमाथि धेरै नै अन्याय भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘उहाँ जत्तिको त्यागी नेतामाथि अन्याय भएकै हो । उहाँलाई न्याया दिने दायित्व कस्केली जनताको हातमा छ । उहाँलाई अत्यधिक मतका साथ सदनमा पुर्याइदिनुस् ।’
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई धोका दिने धोकेवाज कम्युनिष्ट कहिल्यै पनि जनताको पार्टी बन्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले अनेक पुलिन्दा र भ्रम छरेर अघिल्लो चुनाव जिते पनि अब कम्युनिष्टलाई जनताले राम्रोसंग बुझिसकेको बताए ।
उनले उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई तपस्वी नेताको संज्ञा दिए । साथै खेमराजको सम्मानका लागि अत्यधिक मत दिएर जिताएर पठाउन आग्रह गर्दै नेता पौडेलले खेमराजको जितसंगै मुलुकको मुहार फेरिने दावी गरे । उनले भने, ‘खेमराजले चुनाव जितेर सांसद मात्रै बन्दैनन्, अधिनायकवादी कम्युनिष्ट सरकारलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंडाउन पनि सघाउँछन् ।’ महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकलाई भेनेजुयला र रुवाण्डा बनाउन लागिपरेको आरोप लगाए । ‘सरकार मुलुकको हितमा, जनताको हितमा, लोकतन्त्र, संविधानको हितमा, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताको हितमा छैन’, उनले भने, ‘सरकार सच्चिनका लागि पनि यो चुनाव कांग्रेसले नै जित्न आवश्यक छ ।’
केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले कांग्रेसले दुःख गरेर बनाएको राज्यकोषमा कम्युनिष्ट सरकार ब्रम्हलुट मच्चाउन उद्धत रहेको आरोप लगाए । ‘सुशासन, समृद्धि, शान्ति र सुखको ठूला ठूला भाषण गर्ने कम्युनिष्ट कस्ता रहेछन् भन्ने यो २ वर्षमै देखिएको छ’, उनले भने, ‘कम्युनिष्ट देश र जनताको हितमा कहिल्यै हुन सक्दैनन् ।’ युवा नेता गगनकुमार थापाले स्व. रवीन्द्र अधिकारीको सपना पूरा गर्नका लागि भोट दिने हो भने त्यो रवीन्द्रप्रति अपमान हुने बताए । हिजोका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ता भन्दैमा राजाले छुट पाउन हुँदैन भनेर रवीन्द्र राजा विरुद्ध लागेका स्मरण गर्दै नेता थापाले अहिले रवीन्द्रको उत्तराधिकारी हुँ, सपना पूरा गर्छु भन्दै हिंड्न नैतिक हैसियत नहुने बताए ।
नेता थापाले नेपाली राजनीतिमा इमान्दार र निष्ठावान नेताको खाँचो रहेको अवस्थामा कस्केली जनताले त्यो पूरा गर्ने उनले बताए । उनले यो चुनाव सिंगो देशको भविष्यसंग जोडिएकाले यो चुनावमा कांग्रेसलाई जिताएर देशको गति र मति फेर्ने अभियानमा लाग्न आग्रह गरे ।
उम्मेदवार खेमराज पौडेलले आफू सधैं कस्केली जनताको साथमै रहेकाले मत दिएर जिताउन आग्रह गरे । उनले आफूले जितेर गए पनि सधैं जनताकै साथमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले खेमराज पौडेललाई जिताएर कास्कीको मुहार फेर्न लागि पर्ने बताए । अर्का सांसद कुमार खड्काले सरकारको अधिकायकवाद अव धेरै दिन नटिक्ने चेतावनी दिए । उनले कांग्रेसको पक्षमा लहर बढेकाले खेमराज पौडेलको जित सुनिश्चित भएको बताए । कास्की कांग्रेसकी नेतृ लक्ष्मी पाण्डेले भ्रष्ट सरकारलाई सही बाटोमा हिंडाउनु कांग्रेसको कतव्र्य भएको भन्दै यो चुनाव कांग्रेसले जितेमात्रै मुलुक सही ढंगले अघि बढ्ने दावी गरिन् ।
घरदैलोसंगै चुनावीसभा : चुनावको मिति नजिकिंदै गर्दा कास्की कांग्रेसले घरदैलोसंग्र चुनावीभालाई पनि तीव्रता दिएको छ । कास्की–२ का ११ वटै वडामा घरदैलो अभियान जारी राखेको छ भने विभिन्न स्थानमा चुनावीसभा आयोजना भएको छ । घरदैलोमार्फत मतदाता भेटेर जनताको गुनासो सुन्ने काम गरेको र चुनावीसभामार्फत पार्टी र उम्मेदवारका धारणा सर्वजनिक गरिएको कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए । शनिबार पोखरा–१६ मा चुनावीसभा र १५ मा घरदैलो र कोणसभा आयोजना भएको उनले बताए । आइतबार सबै वडामा घरदैलो हुने सभापति केसीले बताए । सोमबार १२ बजे पोखरा–११ र पोखरा–१७ मा चुनावीसभा हुने र सभालाई पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले संवोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।